Fampisaraham-bazana : manakaiky ny farany (+vidéo)
Maro ny tetika fampisaraham-bazana efa nampiasain’ny mpanjanaka teto Madagasikara indrindra tamin’izao krizy izao. Nanomboka tamin’ny famakiana ny ankolafy telo izany, nitohy tamin’ny fampiadiana ny mpitarika ny Ankolafy RAVALOMANANA ary mipaka any amin’ny fampiadiana ny mpitolona sy ny mpandrindra amin’izao fotoana. Miely amina gazety maro eto an-drenivohitra fa mandray anjara amin’ny varo-maizina sasany eto amin’ny Firenena ny olom-boatendry avy amin’ity Ankolafy ity. « Tanjona ny hampisarahana antsika rehetra » hoy i William avy amin’ny antoko TEZA androany.
Nentaniny tsy handairan’izany ny vahoakan’ny ara-dalàna rehetra satria « tsy fotoana mahavariana amin’ny adin’akoho izao fa fiatrehana ny adin’ombalahy ». Nitondrany porofo teny an-kianja rahateo fa ilay ministra GMMR teo nialoha an’Ihanta Randriamandranto no nanokatra ny fanondranana omby velona fa tsy tsy ny mpitantana ny ministeran’ny fiompiana amin’izao fotoana.
Firenena vanona : ahilika izay « tsy manjary » (+vidéos)
Hamondrona ny heriny manomboka eto izay rehetra mahatsapa fa tsy ilaina hitondra an’i Madagasikara intsony ny FATE sy ny forongony. Niverina an-kianja noho izany ny Ankolafy Zafy Albert ary nanamafy fa tsy « hitsidi-pahitra akory fa hanorom-ponenana » ka tsy hiala raha tsy tratra ny tanjona amin’ny fanafahana an’i Madagasikara. Namafisin’ny depiote Mektoub izay nitarika ny delegasiona avy amin’ny Ankolafy Zafy Albert fa maro ny efa nosedrain’ny fiaraha-mitolona hatramin’ny fotoan’ny Ankolafy telo ka tsy ho ravan’ny rivodoza raha izao herin’ny vahoaka mitambatra hanavotra ny Tanindrazana izao.
« Misy ny paikady omanin’ny Pr. Zafy » hoy izy « saingy mila masahina tsara vao azo aroso sao hanao sorona vahoaka indray ». Nanome toky anefa ireto solotenan’ny profesora ireto fa tsy mbola nisitaka ny tolona na dia tsy hita maso aza fa niasa mangina hatrany hamerenana ny ara-dalàna eto Madagasikara.
Dahalo koa ireo …
Nanamafy ny fiarahana mikatsaka vahaolana ho an’ny Firenena koa androany ny mpandrindra ny dinikin’ny samy Malagasy. Tonga nanaporofo ny fiaraha-mientana ny Profesora Rajaonarivelo Paul mpandrindra ity hetsika iray ity. Niombonany sy ny vahoaka ary ireo mpitari-tolona tonga teo amin’ny Kianjan’ny Finoana fa « fotoana hanambarana ny hery izao fa tsy fanaovana samy maka hoazy ». Nentiny tamin’ny sarin-teny mifandraika amin’ny raharahan-dahalo any atsimo ny fitantanana eto amintsika ka nambarany fa « Remenabila ambony latabatra avokoa » ny mpanara-dia an’i tgv rehetra. Maro hoy izy ny porofo milaza fa atao gaboraraka ny harem-pirenentsika ahafahan’ny sasany manefoefo sy mizahozaho. Ny lehiben’ny tahirim-bolam-panjakana rahateo dia efa nitsotra fa « tsy milaminany fitantanana ny volam-panjakana ». Manginy fotsiny ny harena voajanahary maro izay zary fitadiavam-bolan’ny mpitondra amin’izao fotoana. Notsorin’ny Profesora fa « raha hanangana Firenena vanona isika dia ireo mpanao tantely afa-drakotra ireo no tokony asitaka voalohany ».
MFM : vaky bantsilana ny paikadin’ny Frantsay hamotehana ny filoha Ravalomanana (+vidéos)
Teboka efatra ambin’ny folo no voarakitra tao anatin’ny antotan-taratasy iray nifampizaran’ny antoko MFM teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany. Antotan-taratasy izay mamaritra ny tanjon’ny mpanjanaka tamin’ny « fanovana » nataon’i tgv ny taona 2009. Miainga amin’ny sivana nifantenana ny mpitarika ny fanonganam-panjakana izany ary mitohy hatramin’ny androany amin’ny fampidirana ny Vondrona Afrikana handray anjara mivantana amin’ny fanelanana. Maro ny efa tontosa saingy mbola betsaka koa ny voafaritra ho, tetikasa na andalam-pahatanterahana ao anatin’ity drafitra hamerenana ny Frantsay hanjanaka an’i Madagasikara ity.
Raha ny filazan’i Manandafy Rakotonirina dia marim-pototra ity taratasy ity ary manana ny dika mitovy aminy ny any amin’ny fanjakana foibe frantsay. Mihevitra araki’zany ny MFM fa fadrirarirana sisa no ataon’ireo milaza fa hanelanelana fa anjaran’ny Malagasy ny mandry ny andraikitra manandrify azy hivoahana amin’izao krizy izao. Ny voalohany amin’izany ny fifampihavanana mba hananganana tontolo tsara lavitra noho izay efa niaretana hatrizay.
DOCUMENT_FRANCE.pdf 866.47 Ko
Fifanatonana : fepetra feno ny andininy faha-20 (+vidéo)